Gunibsky District, Respublika Dagestan, Russia
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguАбдула
"Indlu epholileyo kunye nentuthuzelo irentwa yonke"
ULUNGISELELO OLUPHELELEYO NOCOCEKO .... Emva kokugqiba ukulungiswa kweYurophu ..
INDLU ixhotyiswe NGEZIXHOBO ZOKUSEBENZA KWASEKHAYA KUNYE NEFUNITURE ... Yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile ... tel.89607777739
2 iibhedi ezilala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
202" HDTV ene-intambo yepremiyamu
Ilali yaseDagestan yaseGunib inemozulu entle yeentaba, apho imozulu ilungile ngaphezu kweentsuku ezingamakhulu amathathu ngonyaka. Wonke umntu olapha unokonwabela izipho zendalo, akonwabele umoya ophilisayo kunye neembono ezigqwesileyo zeentaba ezimangalisayo. Konke oku kwenza le ndawo ibe yenye yezona ndawo zintle zokuchithela iiholide eRashiya. Idolophana ibekwe kwindawo ephakamileyo ye-1.5 km. phezu komphakamo wolwandle, kwithafa leGunib, eyigadi yendalo yezityalo enentaba yayo encinci yemozulu. Obona bude buphezulu bethafa yi-1.8 km.
I-Arhente yeCaspian Travel inikezela ukutyelela iGunib njengenxalenye yokhenketho kunye nohambo. Gcwalisa isicelo kwiwebhusayithi okanye usitsalele umnxeba kwaye siya kukufumana uhambo.
Ukongeza kwimozulu entle, isizathu sokundwendwela iGunib yintyatyambo ejikelezileyo. Okokuqala, yi-relict Radde birch, isityalo esinqabileyo esidweliswe kwiNcwadi eBomvu. Esi sityalo sihle ngokumangalisayo sinexolo elipinki saqala sachazwa sisazinzulu saseJamani uG. Radde emva kokuphela kwemfazwe eyayigquba apha phakathi kwinkulungwane ye-19.
Kule ndawo, iziganeko ezibalulekileyo zeMfazwe yaseCaucasia zenzeke, ezishiya uphawu lwayo ngendlela enomdla, ekhangayo. Apha, kwidolophana yaseNizhniy Gunib, kukho iintsalela zenqaba yaseRashiya eyadlala indima ebalulekileyo ngexesha leMfazwe yaseCaucasus. Udonga lwamatye olungaphezu kweekhilomitha ezi-3 ubude luye lwasinda kwiinqaba. Enye yeencam zayo ijikela kwithambeka elithe nkqo lenzonzobila. Ungabona kwakhona iSango laseBaryatinsky, elibizwa ngokuba yinkokeli yomkhosi owaziwayo, u-Field Marshal Baryatinsky, owatyelela inqaba emva kokuphela kwemfazwe. Phakathi kwezinye izinto, ingqalelo yabakhenkethi itsalwa yisakhiwo seofisi yomphathi wenqaba kunye nesikhumbuzo kumajoni afa ekhusela inqaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Абдула
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gunibsky District